घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू अन्डर सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एल बी पूर्ण उपनाम संग ज्ञात एक फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ "CR7 को उत्तराधिकारी"। हाम्रो आन्द्रा सिल्वा बचपन स्टोरी साथै अनर्थ जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको मिति बाट उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि र सम्बन्ध जीवन भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश छ। अझ धेरै, उनको बारेमा धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (थोरै ज्ञात)।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको सुन्दरताको बारे। यद्यपि, केवल केहिले आन्द्रे सिल्भाको जैवलाई विचार गर्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
आर्य सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
सुरू गर्दै, उनको पूरा नाम आंद्रे मिगुएल भलेन्ते दा सिल्भा हो। आन्द्रे नोभेम्बर १ 6th 1995 day को XNUMXth तारिख जन्मेका थिए उनका बुबाआमा श्रीमान् र श्रीमती इल्वारो सिल्भा पोर्चुगलको बागुइम डो मोन्टेमा।
आन्द्रे नम्र शुरुआतबाट उदाए कि उनी आज के छ। उनका आमा बुबा दुवै परिश्रमी व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो जसले सिल्भा र उसको कान्छो भाइलाई पक्का गर्‍यो, अफोन्सोलाई उनीहरूको जीवनमा सबै चाहिएको थियो। व्यक्तिगत नोटमा, आन्द्रे जहिले पनि हेरचाह गर्ने ठूला भाईहरू हुन् जसले सँधै आफ्ना साना भाई अफोन्सोको हेरचाह गर्छन्। तल उनीहरूको प्रारम्भिक वर्षहरूमा दुई भाइको फोटो छ।
माथि चित्रित लिटिल अफोसो सिल्वा वर्तमान मा एक पेशेवर हॉकी खेलाडी हो जो रोलर ब्लेड संग खेल्छ। Afonso डिसेम्बर 18 को 1998th दिन मा पैदा भएको थियो।
आफ्नो आमाबाबुको साथ रहदा सहयोगी, आर्यन पनि आफ्नो शुरुवाती दिनहरु को समयमा आफ्नो चचेरे भाई संग रहन था। निस्सन्देपण गरेर, उहाँसँग ठूलो विस्तारित परिवार छ, नजिकैको बुना विस्तार गरिएको परिवार जुन हरेक आइतबार सँगसँगै हुनेछ।
आर्य सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- क्यारियर बिल्डअप
आन्द्रे सिल्भा ज्यादै नम्र, अन्तर्मुखी र धेरै खुला थिए विशेष गरी जब ऊ स्कूलमा फुटबल खेल्ने चुनौती दिन्छ। आजका धेरै पेशेवर फुटबलरहरू जस्तै, सिल्भाको बाल्यावस्थाको दिनदेखि नै फुटबलमा स्वाभाविक चासो थियो। ऊ शुरूदेखि नै प्रोफेशनल फुटबलर बन्ने चाहना राख्यो।
धेरै मनाए पछि, उसका आमाबुवाले फुटबलको लागि उनीहरूको अन्तर्मुखी छ-बर्षे छोरालाई सालगुइरोसमा लैजाने निर्णय गरे। फुटबल स्थानको लागि यो छनौट उनको आमाले उत्तेजित गरेको थियो जसले आफ्नो जेठो छोराको साथमा भाग लिन इन्कार गरे, अझै जवान छ।
सालगिगिरोका युवाहरूको तत्कालीन संयोजक अलेक्जान्ड्रे परेराले याद गरे कि आन्द्रेलाई भेटेपछि उनले एक धेरै शिक्षित खेलकुद केटाको पहिलो प्रभाव पारे।
उनी कसैलाई थिए जसले बल छोड्न सकेनन् जबसम्म उनी आफ्ना आमाबाबुलाई भेट्न घर फर्कन बाध्य भए।
आर्य सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- बचपन फेम
आश्चर्यजनक कुरा के हो भने, आन्द्रे सिल्भाको सफलता उही वर्ष उनी साल्गीगिरोसमा सामेल भए। जादुई दिन थियो जब आठ वर्षको उमेर भियाना डो क्यास्टेलमा टुर्नामेन्ट खेल्न गएका थिए आफ्ना सल्गुइरोस टिमका साथीहरू सँगै चित्रमा।
आंद्रे सिल्वा टूर्नामेंट मा मिडफिल्डर को रूप मा खेला। प्रतिद्वंद्व युवती क्लब वियन्ससेनको विरुद्धमा दस्तक चरणको दौडान म्याग्दी बीचमा रहेको थियो जब म्यागिकल सिल्वाले उनको एक्सएनएमक्सक्स गोल गरे।
हे हो, त्यो म्याचमा आफ्नो 15 लक्ष्यहरु गोल गरे !!
यो उपलब्धिले उसलाई नाम कमायो "सानो डेको“। त्यो खेलमा, उनका कोचले विपक्षीलाई सम्मान देखाउन प्रत्येक अन्य कोचले केहि गर्ने निर्णय गरे। खेलको पन्ध्रौं गोल गरेपछि लुइस माछाडोले अचानक सिल्भालाई टीमबाट हटाए। माचडोले यसो भन्दै आफ्नो कार्यको रक्षा गरे;
"मैले उनलाई समातें कि खेल जित्छ, हामी कसैलाई अपमान गर्नका लागि त्यहाँ थिएनौं र आन्द्रेले आफ्ना अन्य साथीलाई मौका दिए पनि राम्रो भयो।"
आर्य सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रोफेशनल लाई रोड
ऊ just बर्षको मात्र छ, तैपनि ऊ जीवन भन्दा ठूलो मान्छे। दुई वर्ष भन्दा कममा सल्गीगिरोसमा प्रवेश गरेको आन्द्रे सिल्भा उर्फ ​​“मिनी डेको"पोर्टोमा सबैभन्दा प्रसिद्ध बाल फुटबलर मध्ये एक बन्नुभयो। यसले एजेन्सी गेस्टिफुटले सानो सिल्भामा ठेक्का दिएको कारण जोर्गे मेन्ड्सको रुचि आकर्षित भयो। यो यस्तो कदम थियो जसले सानो केटोमा मात्र दाउरा हालेको थियो।
जोर्गी मेन्डेसको साथमा, सिल्भाले बोवाफिस्टा र प्याड्रोन्स युवा क्लबहरूमा छोटो दूरी पछि पोर्टोसँगको आफ्नो युवा जीवनको सफल अन्त देखे। आफ्नो युवा प्रसिद्धि को लागी धन्यवाद, उसले १ football वर्षको उमेरमा युवा फुटबल देखि वरिष्ठ पक्ष सम्म निर्दोष मार्ग देख्यो।
18 को उमेरमा सिल्भा व्यक्ति पोर्चुगल फुटबल बनेको थियो। उहाँ उनीहरूको चाहानुभएको संख्या9भए र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, क्रिस्टियानो रोनाल्डोको वारिस।
आर्य सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- मिलानो डाउनफेल
१२ जुन २०१ 12 मा, सिल्वा AC€ मिलियन डलरको शुल्कको लागि पाँच बर्षे करारमा एसी मिलानमा बसाई सकी। उनी पछि एसी मिलानको लागि खेल्ने तेस्रो पुर्तगाली बने पलो फ्यूचर र रुई कोस्टा। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सिल्भा पनि इटालियन विशालको इतिहासमा सब भन्दा महँगो हस्ताक्षर भए।
सिल्भा इटालीको पहिलो सिजनमा फार्मका लागि लडे। यो एक पटक उसले मिलान र सेरी एमा जीवनमा बसोबास गर्न समस्या भएको स्वीकारेको बेलामा यो भयो।
अनुसन्धान पछि, यो सिल्भा सबैभन्दा ठूलो मुद्दा वह इटालियन जीवन शैली र मौसम अनुकूलन गर्न सक्षम छैन थियो कि पाए। रिपोर्ट अनुसार;
यो नयाँ भाषा, नयाँ व्यक्ति, नयाँ संस्कृति र नयाँ टोलीको लागि एक मुश्किल अनुकूलन थियो।
सिल्भाले 24 सेरी ए एपमा मात्र दुई गोलहरू गर्न सफल भए। यो गरीब आकार फिर्ता बनी छ किनकी उनले पेकिंग आदेश धक्का दिए।
आर्य सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- बहाली
मिलनमा गाह्रो मौसमको बावजुद, आन्द्रे सिल्भाले उनको ध्यान २०१ 2018 विश्वकपमा केन्द्रित गरे। रसियामा, उनले कम्तिमा छ गोल गर्ने केवल पाँच खेलाडीहरू (कान्छो) बीचको रेकर्ड बनाए।
2018 विश्व कपबाट, सिल्वा अझै एक भन्दा बढी भयो इममोबाइल नो।9जसले मात्र बललाई नेटमा राख्छ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
आर्य सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
कुनै संदेह बिना, सिल्भाले केही सुन्दर गोल गरे। तथापि, एन्ड्रेल सिल्वा द्वारा बनेको सबैभन्दा सुन्दर गोल एक हो जसले सारा रोराग्रिजसँगको सम्बन्धलाई 21-वर्ष-पुरानो पोर्चुगल मोडेलको रूपमा देखाएको छ।
सारा केमिकल इन्जिनियरि ofको स्नातक हो जुन दिमागको साथ सुन्दरता दर्साउँछ। उनले आफूलाई मॉडलिंग गर्न र मिलन, रोम, पोर्टो र लिस्बन बीचको यात्रामा समर्पित गरिसकेकी छिन्। पोर्टो मा आफ्नो समय देखि दम्पती संगै थिए भन्ने विश्वास छ। लेख्ने समयमा जस्तै, साराले हालमा लगभग 58,000 XNUMX,००० व्यक्तिको अनुसरण गर्दै एक इन्स्टाग्रामलाई मेमास गर्छ, जो उनको बिकिनी तस्वीरहरू पर्याप्त पाउन सक्दैन (तल हेर्नुहोस्)।
यद्यपि सिल्भा सामाजिक नेटवर्कि sites साइटहरूमा सक्रिय छ तर आज सम्म साराले आफ्नो जीवनको प्रेमको एकल फोटो पोस्ट गर्न अस्वीकार गरे। दुबै प्रेमीहरूले रिंग साट्ने अघि यो मात्र कुरा भयो।
अन्ड्रे सिल्वालाई तलका फोटोमा देखाइएको तलका हातमा फेला परेको एक छोरा भएको अफवाह छ। लेखन को समयमा, त्यहाँ कुनै स्पष्ट तथ्य छैन कि उसको पुत्र को आमा हो।
आर्य सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत तथ्यहरू
सिल्वा धेरै साहसी मानसिकता संग क्यारियर भावुक छ। उहाँ एक सभ्य र निर्णायक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले लडाइँलाई जारी राख्नेछ जब सम्म उसले आफूलाई भन्दा उत्तम पाउँदछ। तपाईं पक्का हुन सक्नुहुनेछ कि सिल्वाले तपाईंको गोप्य राख्नेछ, जुन तिनीहरू हुन सक्छ। छुट्टै समयमा, सिल्वाले आफ्नो भाइ, आन्द्रासँग हॉकी जान्छ।
पानीको तत्व आन्द्रे सिल्भाको राशि चिन्हको साथ सम्बन्धित छ। पानी वर्णन उनको वृश्चिक गुणहरु को लागी उपयुक्त छ।
जल प्रेमी: आंद्रे सिल्भा स्वीकार्छन् कि उनीहरूले मिलानमा र सेरी ए मा जीवनमा बसोवास गर्दथे, खासगरी जब यो "समुद्र तट र समुद्र। "इटालियन दिग्गजहरू सामेल भएपछि, उहाँले एकपटक क्लबको आधिकारिक फोर्जा मिलान पत्रिकालाई एकपटक भन्नुभयो।
"यो मेरो घर, मेरो परिवार र समुद्र तटबाट टाढा रहनुभएको पहिलो पटक हो। म समुद्री हवामा सास फेर्न आदी छु। "
तपाईंलाई थाँहा थियो?? पानीको साथमा प्रेम हुनु एक तरल पदार्थ, प्रवाह, भित्ता भावनाहरु को प्रतीक हुन्छ। पानीको रूपमा निश्चित रूपमा शक्तिशाली प्रभाव पार्नेछ, त्यसैले सिल्वा गर्छ कि उसले आफ्नो क्यारियर जीवनमा गर्छ। सिल्वा एक सहज र संवेदनशील व्यक्ति हो जुन अरूको भावनामा लिन सक्दछ, उनीहरूको प्रक्रिया, र एक योजना वा समाधान राख्नुहोस् जुन सबैलाई ईमानदार हुनेछ।
लेखनको समयमा, उहाँले अझै ब्याकफ्लप चलाउनुभएको छ र यो कुशलतामा सिद्ध छ।
यो परिवारमा चल्छ। जल क्रियाकलाप सिल्वा र अफोसोको लागि खुशीको क्षणहरू परिभाषित गर्दछ।
जसरी पानी संग संपर्क गर्नु पर्छ, सिल्वा पनि समुंदर को किनारा मा टकटकी प्यार गर्दछ। यो बताउँछ कि उनी पहिलो पटक आफ्नो देश छोडेपछि उनीहरूले गृहकर्मी पाए।
आर्य सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्यारा लगाउ
स्विकार गर्नुहोस्: क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि सिल्वामा ह्यान्डमोरिटी मशाल गुज्र्यो। धेरै फुटबल फ्यानहरूको लागि, आन्द्रे सिल्भाले आफ्नो प्रशिक्षक भन्दा सिङ्ग्रो देख्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो आंद्रे सिल्भा बालपण कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्क पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।